एसएलसी पछि के पढ्छिन करिश्मा ? - सडक मिडिया
एसएलसी पछि के पढ्छिन करिश्मा ?
२०७५ सालको या एल सी परिक्षाको रिजल्ट आए संगै नायिका करिश्मा मानन्धरले ३ जीपीए लेराएर परिक्षा पास गरेकी छिन। अब फ्यानहरुलाई लाग्दै छ के गर्छिन करिश्माले । सांचै अब उनले पढाईलाई निरन्तरता दिन्छिन कि अभिनय लाई फेरी अगाडी लैजान्छिनकि के गर्छिन यो भने समय संगै पता लाग्नेछ।
केहि स्रोतका अनुसार अब करिश्माले आफ्नो पढाई लाई यतिमै सिमित राख्नेछिन भन्ने पनि बुझिएको छ। यदेप्पी उनले पढाई लाई अझ अगाडी निरन्तर गर्छिन या गर्दिनन भन्ने बारे भोलिको दिनमै थाहा हुनेछ। त्यसो त नयाँ शक्ति पाटि बाट राजनीति यात्रा पनि शुरु गरेकी करिश्मा पछिल्लो समय नयाँ शक्ति पाटि परित्याग गरेको भन्ने हल्लाहरु सुन्नमा आएको थियो। नयाँ शक्ति पाटि र फोरम मिलेर समाजबादी पार्टी बने लगतै नायिका करिश्माले पाटि परित्याग गरेको खुलाशा गरेको समाचार मिडियामा आएको थियो।
तर यता बाबुराम भट्टराई भने करीश्माले पार्टी न त्यागेको र उनलाई पढाईको लागि छुट्टी दिएको बताएका छन। चलचित्र जात्रैजात्रा हेर्ने क्रममा पत्रकारको प्रश्नमा डा.बाबुराम भट्टराईले करिश्मा बिशेस गरि कलाकार नै भएको र अहिले पार्टी त्यागेको नभई छुट्टीमा रहेको बताएका हुन।
Previous Post: पढ्नको लागि तुइनकाे जाेखिम यात्रा गर्न विवश विद्यार्थी
Next Post: भारतसंग हारेकाे वेस्टइन्डिज तियोगिताबाटै बाहिरियाे